UNGAYENZA KANJANI ILAKSHMI NARAYANA POOJA KU-AKSHAYA TRITIYA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-INGOKOMOYA
Ungayenza Kanjani I-Lakshmi Narayana Pooja Ku-Akshaya Tritiya
Ezemidlalo Imiklomelo Yekhilikithi YaseNew Zealand: UWillionon uwina iMedal Sir Sir Hadlee okwesine
Izindaba Abaqeqeshi baseMelika bahola izifundo zesiNgisi zothisha baseNdiya
Ama-movie I-Ugadi 2021: UMahesh Babu, uRam Charan, uJr NTR, uDarshan kanye nezinye izinkanyezi zaseNingizimu Afrika bathumela izifiso kubalandeli babo
Ubuchwepheshe Izikweletu ze-AGR Nendali Yamuva Ye-Spectrum Endalini Engathinta Umkhakha We-Telecom
Ikhaya Ingokomoya le-Yoga Imikhosi Ukholo Mysticism oi-Abasebenzi Ngu Subodini Menon ngo-Ephreli 19, 2017
Ukulungisa ama-poojas ngosuku lwe-Akshaya Tritiya kungenye yezinto ezingcwele kakhulu ongayenza. Noma isiphi isenzo somusa, isisa senhliziyo noma ingokomoya sizobusiswa ngezinzuzo eziyishumi. Abantu bomphakathi wamaHindu bakholelwa ukuthi konke abakwenzayo kuyindlela yamandla.
indlela yokwenza upma ku-microwave
Amandla owakhayo ngenkathi wenza okuthile aphonswa ekwazini okuhlangene kwendawo yonke. Lokhu kwaziwa njenge 'Karma'. IKarma ingaba yinhle futhi ibe mbi. Uma wenza i-Karma enhle, indawo yonke ikuthumela ama-vibes amahle. Uma wenza okubi, uzoba nezinto ezimbi ezenzeka empilweni yakho.
Funda futhi: Nakhu konke odinga ukukwazi mayelana ne-Sri Maha Lakshmi stotram!
Ukwenza ama-poojas kwakha amandla amahle okuzungezile futhi kuzoheha ukuzethemba okuhle okuzokusiza uthole lokho okufisele. Kepha ngosuku luka-Akshaya Tritiya, noma yini oyenzayo izokunikeza imiphumela ephindwe kayishumi.
Ngakho-ke, kubhekwa njengosuku oluhle kakhulu lokwenza izinto ezingokomoya ezifana ne-poojas, havans ne-yagnyas. Enye yama-poojas abaluleke kakhulu enziwe ngosuku lwe-Akshaya Tritiya yiLakshmi Narayana pooja.
ILakshmi Narayana pooja yenziwa ukuheha inhlanhla, ukuchuma nenjabulo. Le pooja iyasiza ukumema uthando emndenini. Inikeza ukuvikelwa kwamalungu omndeni futhi idala isimo esinokuthula ekhaya nasendaweni yomsebenzi.
I-pooja enhle iletha inala yengcebo ekhaya. Kuyasiza ekuqiniseni isibopho phakathi kwendoda nenkosikazi. Ukuzinikela nengokomoya ukubona ukuphakama ngemuva kokuba le pooja yenziwa endlini.
i-saraswati mantra yokuvelela ezifundweni
Kuthiwa indlu lapho kwenziwa khona uLakshmi Narayana pooja ithola umusa nezibusiso zeNkosi Maha Vishnu noNkulunkulukazi uMaha Lakshmi. Umuzi onjalo awusoze wahlangabezana nenkinga yezezimali noma ezinye izithiyo.
Izinto ezidingekayo ukwenza iLakshmi Narayana Pooja elula:
Ama-Idols aseLakshmi naseNarayana
Isibani esinamafutha nentambo
Izingubo ezizonikelwa ezithombeni
Imihlobiso yanoma yiluphi uhlobo okufanele inikelwe ezithombeni
UJaneu (intambo engcwele izogqokwa)
Amaswidi, izithelo ezomile, ubisi, ukhukhunathi, i-panchamrit, izimbali, njll., Okuzonikelwa njengeprasad
Ukwenza Isifungo Noma 'Sankalp'
Lapho wenza i-pooja ukuthola uhlobo oluthile lomphumela, kubalulekile njalo ukwenza isifungo noma 'sankalp'. Uma wenza i-pooja ngaphandle kwezifiso noma ngamanye amagama, uma i-pooja yakho iyi-'Nishkaam ', ungaqhubeka ne-pooja ngaphandle kokuthatha i-sankalp.
Ukwenza isifungo, phatha amanzi erayisi nezimbali ngesandla sakho sokunene. Memezela izwi usuku, inyanga nonyaka lapho i-pooja iqhutshwa khona. Okulandelayo, yisho indawo lapho i-pooja yenzeka khona. Shono igama lakho nesizathu sokwenza i-pooja. Uma usuqedile, vumela amanzi asesandleni sakho agelezele emhlabeni.
Funda futhi: U-Akshaya Tritiya Wokubaluleka
Akunandaba ukuthi ukhonza kuphi i-pooja, i-Lord Ganesha kufanele ikhulekelwe kuqala.
Ungakhetha ukugcina isithombe seNkosi Ganesha noma umcabange nje ukuthi useduze. Uma unesithombe, geza isithombe bese unikela ngeNkosi Ganesha izingubo ezintsha nezisha. Manje, mkhonze usebenzisa izimbali, i-akshatha (irayisi eluhlaza okuvame ukuba ne-turmeric exutshwe kuyo) nezinti zempepho. Khanyisa isibani bese wephula ukhukhunathi. Thandaza eNkosini Ganesha ukuze ususe zonke izithiyo ekwenzeni i-pooja. Futhi, cela usizo ekuqedeleni i-pooja ngempumelelo.
ULakshmi Narayana Pooja
ungayifaka kanjani i-kajal eminyene kusivalo esiphansi
Izithombe zikaLakshmi neNarayana kumele zigezwe kuqala. Sebenzisa i-panchamrit kuqala bese ufaka amanzi ukuhlanza ama-Idols. Manje, nikela u-Goddess Lakshmi no-Lord Narayana izingubo ezintsha. Hlobisa izithombe ngemihlobiso nezimbali zezimbali. Banikeze amakha anuka kamnandi. Sebenzisa i-vermilion ukuhlobisa amabunzi abo nge-tilak.
Manje, khanyisa isibani ngokuzinikela okuphelele bese unikela ngezinsimbi zempepho zeNkosi Lord Narayana nezithixokazi zikaLakshmi. Manje banikeze izimbali. Qiniseka ukuthi amalambu akhanyiswa nge-ghee noma ngo-oyela omusha. Sebenzisa isibani ukwenza i-aarti ezithombeni. Ngemuva kwe-aarti, zungezisa izithombe kathathu. Manje, unganikela ngezinto ze-prasad kuNkulunkulu noNkulunkulukazi.
Chant 'Om Namo Narayana' ngenkathi usebenzisa i-ashtagandha ukubeka i-tilak ebunzini likaNkosi Narayana.
Chant 'Om Lakshmi Namah' bese usebenzisa i-vermilion ukubeka i-tilak ebunzini likaNkulunkulukazi uLakshmi.
Qhubeka uhuba iLakshmi-Narayana Mantra kuyo yonke i-pooja.
ILakshmi Narayana Mantra imi kanje:
'Om Lakshminarayanabhyam Namah'
indlela yokutshala amashiya awugqinsi ngesonto
Ngemuva kokuthi i-pooja isiqedile, bonga iNkosi uNarayana no-Goddess Lakshmi ngokwamukela ukukhonza kwakho. Xolisa nganoma yiluphi uhlobo lwamaphutha okungenzeka uwenzile kungaba yingqondo noma umzimba, owaziwayo noma ongaziwa.
Funda: Izitayela ezi-14 ezihamba phambili zokuzama ngezingubo zendabuko
Funda: Imibono Yokugqoka Kwezingane Ezi-14 Komama
izingcaphuno zosuku lobungani ngesiNgisi ngemifanekiso
Ungayenza kanjani i-crispy rava dosa
indlela yokunciphisa usayizi wezindebe ngokwemvelo ekhaya
i-apula cider uviniga wokukhula kwezinwele nodayi
ubhanana ulungele ukwehla kwesisindo
amanzi afudumele anezinyosi zokwehlisa isisindo